အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: April 2012
အမျိုးသားဒီမိုကရေစိ အဖွဲ့ ချုပ် ၏ ကြေငြာချက်
ကြေ ညာ ချက်http://aunglinwai-wai.blogspot.com/0
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် ၏ ကိုယ်စာလှယ်တို့ အလေးအနက် သစွာဆိုရမည့် အခြေခံ ဥပဒေ ပုမ်မ ( 125 ) အရ ဇယား ၄ ပါး စကားရပ် ဖြစ်သော ကာကွယ် ထိန်သိမ်း စောင့်ရှောက် အစား
လေးစားလိုက်နာဟူသော စကားရပ်ကို ပြောင်းလည်း သတ်မှတ်ပေးပါရန် အခြေခံဥပဒေ ကော်မရှင်ရုံးသို့တင်ပြခဲ့ပါ။
ပညာရှင်များ . ဂျာနယ်လစ်များ နှင့် အဖွဲ အစည်းအသီးသီ ၏ ထုပ်ပြန်ကြေ ညာချက်များ အရ အဆိုပါစကား ရပ်များသည် တူညီသော အဓီပါယ်သတ်မှတ်ချက် ဖြစ်သည့်အပြင် အခြေ ခံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခြင်း မပြု ရဟုသော သဘော ကို သက်ရောက်ခြင်းမရှိပါ သောကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ အမျိုးသား ဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ ချူပ် လွတ်တော်ကိုယ်စာလှယ်များ သည် လွှတ်တော်သို့ တက်ရောက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း နိုင်ငံတော်နှင့် တကွ ပြည်သူလူထု အားလုံးသို့ အသိပေးကြေငြာ အပ်ပါသည်။
အထက်ပါစကား ရပ်အားလုံးသည် မိမိသဘောအလျောက် ရေးသားထားချက်များ ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်နှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ သို့ သော် ထိုကဲ့ သို့ ဖြစ်စေချင်သည့်အတွက် အကျိုးမြှော် ကာ နိုးဆော် လိုက်ရပါသည်။
Posted by Wai Lin Aung at 8:45 AM
Solid Carbide Spiral 'O' Flute, Aluminum Cutting Router Bits - Toolstoday.com - Industrial Quality Router Bits
Posted by Wai Lin Aung at 8:20 AM
မင်းကိုနိုင်နဲ့ မြအေးတို့ ကတော့ ရိုဟင်ဂျာ တွေ ကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လွှတ်တော်ကို တင်ပြမယ်တဲ့။
မျိုးမြင့်ချို: “လေးစားလိုက်နာ”လို့ပြင်မပေးရင် ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ (တူမောင်ညို)
Posted by Wai Lin Aung at 8:41 AM
<a href="http://www.gainmoneyfast.com/-59463/3925.htm" target="_top"><img src="http://www.gainmoneyfast.com/banners/banner_728x90_993493.jpg" border="0" alt="Lot of Visitors" title="Lot of Visitors" width="728" height="90" /></a><img style="border:0" src="http://www.gainmoneyfast.com/services/imp.php?a_aid=59463&a_bid=3925" width="1" height="1" alt="" />
It works 24 hoursaday,7daysaweek, 365 daysayear, and for not just days or weeks, but for months and months, making you big of cash.
<a href="http://www.gainmoneyfast.com/-59463/3915.htm" target="_top"><img src="http://www.gainmoneyfast.com/banners/banner_600x600_987630.jpg" border="0" alt="Lot of Visitors" title="Lot of Visitors" width="600" height="600" /></a><img style="border:0" src="http://www.gainmoneyfast.com/services/imp.php?a_aid=59463&a_bid=3915" width="1" height="1" alt="" />
<a href="http://www.gainmoneyfast.com/-59463/3992.htm" target="_top"><img src="http://www.gainmoneyfast.com/banners/banner_468x60_1058434.gif" border="0" alt="Lot of Visitors" title="Lot of Visitors" width="468" height="60" /></a><img style="border:0" src="http://www.gainmoneyfast.com/services/imp.php?a_aid=59463&a_bid=3992" width="1" height="1" alt="" />
<a href="http://www.gainmoneyfast.com/-59463/3955.htm" target="_top"><img src="http://www.gainmoneyfast.com/banners/banner_300x600_1014294.jpg" border="0" alt="Lot of Visitors" title="Lot of Visitors" width="300" height="600" /></a><img style="border:0" src="http://www.gainmoneyfast.com/services/imp.php?a_aid=59463&a_bid=3955" width="1" height="1" alt="" />
<a href="http://www.gainmoneyfast.com/-59463/3986.htm" target="_top"><img src="http://www.gainmoneyfast.com/banners/banner_300x100_1023309.jpg" border="0" alt="Lot of Visitors" title="Lot of Visitors" width="300" height="100" /></a><img style="border:0" src="http://www.gainmoneyfast.com/services/imp.php?a_aid=59463&a_bid=3986" width="1" height="1" alt="" />
<a href="http://www.gainmoneyfast.com/-59463/3873.htm" target="_top"><img src="http://www.gainmoneyfast.com/banners/banner_160x600_966336.jpg" border="0" alt="Global Promotion Alliance" title="Global Promotion Alliance" width="160" height="600" /></a><img style="border:0" src="http://www.gainmoneyfast.com/services/imp.php?a_aid=59463&a_bid=3873" width="1" height="1" alt="" />
Posted by Wai Lin Aung at 7:37 AM
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Tu Maung Nyo - Articles: NLD ရဲ့ ထိပ်တန်းကိစ္စသုံးရပ်နဲ့ ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့အဓိကတာဝန် တူမောင်ညို မတ်လ ၂၈၊ ၂၀၁၂ “(၆၇) နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့” မှာပြောတဲ့ ဗိုလ်မ...
Posted by Wai Lin Aung at 8:22 AM
သားတို့ တာ ၀န်ကျေပါတယ်နော်။ အမေ့ကိုချစ်တဲ့ အမေ့သားသမီး များတွေရဲ့ တာဝန်ကျေတယ်ဆိုရင် သားတို့ သမီးတို့ ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေ ကို ပျောက်အောင်ကုပေးပါအမေ။
ဖိနိပ်ခံဘ၀နဲ့ နေရပြီး ၊ အမှန်တရားကို ဖက်တွယ် ရင်း စစ်ဖိနပ်အောက် ပြားပြားမှောက်နေရသော ၊ အကြောက်တရား ကို ရင်ဝယ်ပိုက် ပြန်မပြောရဲသော၊
ဆယ်အိမ်ခေါင်းက အစ တိုးလျိုးတောင်းပန် ဘာမှ မလုပ်ရဲသော ၊ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများရဲ့မူလရပိုင်ခွင်
့များ ဘာမှ မရသော၊ မဲပေးခွင့်လေးကို အမျိုးမျိုး နှောက်ယှက် ခံနေရသော ၊အလုပ်အကိုင်မဲ့အထင်သေးခံနေရသော၊ အမေ့ရဲ့ သားသမီးများ
Posted by Wai Lin Aung at 8:04 AM
Posted by Wai Lin Aung at 7:39 AM
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Burma's water festival
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Burma's water festival: သင်္ကြန်မှာ ဖော်ချွတ်ခြင်း သွန်းနေစိုး facebook.com/ThornNaySoul ဧြ ပီ ၁၆၊ ၂၀၁၂
Posted by Wai Lin Aung at 8:43 AM
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Ku Mojo - Cartoon: နိုင်ငံရေး မလုပ်ရင် ပြီးရော ကာတွန်း - ကူမိုးကြိုး ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၂
Posted by Wai Lin Aung at 8:37 AM
မနီနီအောင်၊မစုငြိမ်းဖြူ ၊မအိဖြူ နှင့် မမိုးမိုးဦးတို့သည် ၄င်းတို့၏ ရင်းတွင်းခံစားချက်များကို ဖွင့်လှစ်ပြကြသည်။ သူတို့ ခြည်း မဟုတ်သေး ၊အလုပ်သမား 300 ကျော်တို့သည်လည်း ၄င်းတို့ နည်းတူ
တန်းတူ ညီမျှမူကို မရကြချေ။
ဖွဲစည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အခန်း(၁) ပုဒ်မ 21 (က) နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တွင် ပြဌာန်းထားသည် တန်းတူညီမျှမူ၊လွတ်လပ်မူ၊တရားမျှတမူ အခွင့် အရေးတို့ ကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
ထိုအတူ အခန်း ၉ ရွေကောက်တင်မြှောက်ခြင်း ပုဒ်မ 390 (က)တွင် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်သူ ဥပဒေအရ အရည်အချင်းပျက်ယွင်းသူ မဟုတ်လျှင် မဲပေးနိုင်သည် ဟု ဆိုထားပြန်သည်။
မနီနီအောင်တို့သည် ဥပဒေ အရ မဲပေးနိုင်သော်လည်း မဲပေးခွင့် မရခဲ့ပေ။
အကြောင်းကား မှတ်ပုံတင် မရှိသောကြောင့် ၊ မှတ်ပုံတင်ရှိသော်လည်း မဲရုံက ထုတ်ပေးသည် ကူပွန် မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
မဲပေးခွင့် မရှိသူများမဟုတ်ပါပဲ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နံတစ်လျားတွင် အဆိုပါ အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသူများ ရှိနေသည်ဆိုလျှင် ကား ................
မည်သို့ ပင် မလျော် သြဇာ သုံးစွဲကာ ခြိမ်းခြောက်အနိုင်ယူ ညစ်ပတ်စေကာမူ
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် သည် ထိုက်ထိုက်တန်တန် အနိုင်ရခဲ့လေသည်။
သို့ သော်..... သည်လို အဖြစ်မျိုး အနာဂတ်တွင် မဖြစ်စေချင်ပါ။
အာရှနဂါး အထည်ချူပ်စက် ရုံ
သူတို့ ကို ဆက်သွယ်စေချင်သဖြင့်
ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်ကို ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by Wai Lin Aung at 8:02 AM
Posted by Wai Lin Aung at 8:57 AM
အဲ့ဒါတွေ ကို ပြင်စေချင်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချူပ်သည် ပြည်သူများ၏ တခဲနက် ထောက်ခံ မဲပေးခြင်းကို ရခဲ့သည်။
ဒဂုံတောင် မြို့နယ် ၂၄ ရပ်ကွက် နှင့် 25 ရပ် ကွက် အကြား စည်ပင်လမ်းပေါ်တွင် ယမန်နေ့ ညက ပျော်ရွှင်ခဲ့ ကြသည်မှာ ပြည်သူလူထုများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ ၊နေထိုင်မကောင်းသူများ စိတ်အနှောက်ယှက် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။.လွပ်လပ်ပြီ ဖြစ်သဖြင့် လမ်းမပေါ်တွင် ဆေးရိုးလှမ်းကြ ခြင်းဖြစ်သည်။ အမေက လည်း ကြိုသိသဖြင့် စည်းကမ်းရှိစွာ ပျော်ရွှင် ကြရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
NLD အောင်နိုင်ခြင်းသည် ပျော်ရွှင်ရန်မဟုတ်ချေ နိုင်ငံတော် ၏ တာဝန်များ ကို ထမ်းဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။။
မတရားမှုများကို ဖော်ထုတ်ရန်၊ ဆင်းရဲနွမ်ပါးသူကို ကူညီရန်၊ မလျော်သြဇာသုံးသူများကိုရှင်းလင်းရန်၊ အာဏာ ကို ၀ယ်ရောင်းလုပ်ကာ ကိုယ်ကျိုးရှာနေသူများကို သုတ်သင်ရန်ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလား။
make money: အဲ့ဒါတွေ ကို ပြင်စေချင်
make money: အဲ့ဒါတွေ ကို ပြင်စေချင်: ဒီနေ့ သတင်းတစ်ပုဒ် ဆိပ်ကမ်း မြို့နယ် (၉၀) ရပ်ကွက် ဇေယျာသီရိလမ်းအနီး ကြံခိုင်ရေးက လှူထားသော ရေစက်တစ်စက်ရှိသည်။ အိမ်ခြေ သုံးလေးဆယ် ခန့် ကိုေ...
Posted by Wai Lin Aung at 8:17 AM
2.4 .2012 သတင်း
ဆိပ်ကမ်း မြို့နယ် (၉၀) ရပ်ကွက် ဇေယျာသီရိလမ်းအနီး
ကြံခိုင်ရေးက လှူထားသော ရေစက်တစ်စက်ရှိသည်။ အိမ်ခြေ သုံးလေးဆယ် ခန့် ကိုရေပေးဝေ၏။
ယမန်နေ့ ရပ်ကွက်သူ ရပ်ကွက်သားများ က NLD ကို မဲပေးကြသည်။ ကြံ ခိုင်ရေး ကို မဲပေးခြင်းမှ ရှောင်ကြလေ၏။ ကြံခိုင်ရေး ပါတီ ကို မည်သည့် အတွက်ကြောင့်မုန်းလေသည်မသိ။
ယနေ့ ကြံခိုင်ရေး ကလှူ ထားသော ရေစက် မှ ရေပေးဝေခြင်း ကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။ ပညာပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာတတ်နိုင်ကြသေးလဲ ဟု မပြောသော်လည်းပြောသယောင် ဟုသိရသည်။
မှ သတင်းပေးလာသည်။ အဲဒါတွေ ပြင်ဖို့လိုသည်။
အထက်ပါသတင်း သည် ခိုင်မာတိကျသော သတင်းဖြစ်ကြောင်း နှင့် အဆိုပါ ပိတ်ထားသော ရေစက်မှ ယနေထိတိုင်အောင် ပြန်လည်ရေပေးဝေခြင်းမရှိကြောင်း ကို ယနေ 3ရက် 2012 နေတွင် ထပ်မံ အတည်ပြုပြောကြားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ရပ်ကွက်သူရပ်ကွက်သားများ ရေပြန်လည် ရ ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအဖြစ် တင်ပြအပ်ပါသည်။
Solid Carbide Spiral 'O' Flute, Aluminum Cutting R...
မျိုးမြင့်ချို: “လေးစားလိုက်နာ”လို့ပြင်မပေးရင် ဘာဆ...
aunglinwaiwai@yahoo.com aunglinwai.net@gmail.com M...
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Burma's wat...